Awaamiir Lagu Soo Rogey Duulimaadyadii Garoonka Aadan Cadde.
Dowlada Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in la hakinayo howlihii duulimaadyada garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho 22-ka bishan oo ku beegan maalin arbaco ah.
Wasaarada Gadaiidka iyo Duulista hawada Soomaaliya ayaa ku wargalisay shirkadaha Diyaaradaha ee ka howlgala Garoonka Aadan Cadde in la hakiyay diyaaradhii garoonkaasi kasoo degi jiray iyo kuwii ka duuli jiray.
Sababta loo hakiyay duulimaadyada garoonka Diyaartadaha Aadan Cadde 22-ka bishan ayaa lagu sheegay in ay ka dambeyso caleemo saarka Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo oo la caleemo saarayo 22-ka bishan.
Caleemo saarka Madaxweynaha waxaa lagu casuumay kana soo qeyb galaya Madax kala duwan ay ku jiraan Madaxweynayaal iyo masuuliyiin sar sare oo ka kala imaan doon a qaar kamid ah wadamada Arimaha Soomaaliya daneeya.